Shiiqaalow: ” Siyaasiyiin Muqdisho Waxba ka qaban Waysay K/Galbeed Waxba kama soo Dhicin Karaan!…” - Latest News Updates
Shiiqaalow: ” Siyaasiyiin Muqdisho Waxba ka qaban Waysay K/Galbeed Waxba kama soo Dhicin Karaan!…”
Waa koox kala jeeda, qolo walba meel ayay ku xiran tahay, dhinac kasta waa isla quman yahay, waligood dan Guud isuguma imaanin, Qaarkood waa Mucaarad aad u fogaaday halka qaarka kalana ay yihiin Muxaafad danaystayaal ah!
Waa Alla mahadii, xalay ayay muddo Seddex sanno ah markii ugu horeysay ku kulmeen Magaalada Muqdisho, iyaga oo kala baqayo ayay isugu yimaadeen shir degdeg ah, hal ajande oo ku aadan sidii ay wax isaga dhihi lahaayeen Baarlamaanka cusub ee K/Galbeed ayay ka wada-tashnayeen.
Rag waaweyn oo la filayay inay shirkaasi ka soo muuqdaan ayaa ka baaqsadey imaatinka kulankaasi, Macnayaal kala duwan ayaa laga sameeyay baaqashada raggaasi, xuuraan dheer oo la sameeyay kadib ayaa lagu ogaaday maqnaanshaha raggaasi inay la xiriirto cabsi ay ka qabaan in lagu ag sawirro mucaaradka ku kacsan Dawladda Federaalka!
La yaab ayay dad badan ku noqotey markii ay maqleen inay Muqdisho shir ku leeyihiin Wasiiradda iyo Xildhibaannada ka soo jeeda G/Banaadir, hal-xiraale ayay muwaadin walba ku noqotey waxa isu keenay raggaasi oo horey isu necbaa!
Aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyay shirkaasi, xubno ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay kulankaasi, halka qaar kalana ay shirkaasi ku tilmaameen inuu ahaa “Dhoola tus siyaasaddeed iyo Shinbirayahoow Heesa”
Shirkaasi oo socday muddo saacaddo ah ayaa ugu dambayntii waxaa lagu doortay Guddi wada-hadal kala yeesha Madaxweynaha K/Galbeed sidii laga yeeli lahaa Kuraasta siyaasiyiintaasi beeshooda uga maqan K/Galbeed, wey adag tahay in Kursi la qaatey dib loo soo celiyo, saadaasha la bixinayo ayaa tilmaamaysa Madax-salaax mooyee inaan wax kale laga soo qaadeyn C/casiis Lafta Gareen!
Hubaashii loogama fadhiyo Siyaasiyiintaasi inay wax guul ah ka keenaan K/Galbeed, raggaasi oo horey waxba uga qaban waayay culeysyda haysta ummaddooda ku nool Muqdisho, ha ka sugin inay Dib u soo celiyaan Kuraas la qaatey.